Hama ga --eweta Scooters ya abụọ na IFA na Berlin | Akụkọ akụrụngwa
Mgbe anyị na-ekwu maka Hama, o doro anyị niile anya na anyị na-emeso otu n'ime ngwa ngwa ngwa ngwa na ngwa ahịa na ngalaba teknụzụ. Onye isi ya na Monheim (Germany) yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ 2.500 gburugburu ụwa, Hama na-aga n'ihu na-eto kwa ụbọchị n'ihi nnukwu pọtụfoliyo ngwaahịa ya. Katalọgụ a gụnyere ụdị ngwa ọ bụla maka PC, laptọọpụ, igodo, ekwentị mkpanaaka na ekwentị, telivishọn, foto na eserese vidiyo dijitalụ, nkasi obi na ugbu a abụọ mbụ ya Iguzozi skuta nke ika, Slalom Cruiser na Cross Cruiser.
Abụọ igwe eletrik ọhụrụ a sitere na Hama A ga-ewepụta ya n'ihu ọha na ihe omume teknụzụ ọzọ na-esote na Germany, iFA na Berlin nke a na - eme site na Septemba 2 ruo 7 ma bụ na ụlọ ọrụ ahụ anaghị akwụsị ịga ụdị ihe omume ndị a (dị ka MWC na Barcelona) ebe ọ na - egosi otu akụkụ nke nnukwu ngwaahịa nke ngwaahịa. Oge ikpeazụ anyị kwurịtara banyere Hama anyị hụrụ nyocha zuru ezu nke òké Laser Scanner na ọ bụghị oge mbụ anyị kpọrọ ụlọ ọrụ a aha n'ihi ọtụtụ katalọgụ na ogo ngwaahịa ya.
N'oge a ha esoro na Companylọ ọrụ German Oche ụkwụ, ịzụlite igwe eletrik abụọ a. Ihe nlereanya Slalom Cruiser O nwere wiil siri ike nke 16,5 cm ma enwere ike iji ya na ebe siri ike ma sie ike. Modeldị ọzọ bụ Cross Cruiser, nke, dị ka aha ya na-egosi, na-adabere n'akụkụ ọ bụla buru ibu ma sie ike karị. The wiil nwere a dayameta nke 25,4 cm na chambered n'ime maka mma cushioning niile na-ebupụta.
Maka oge ahụ price na tọhapụ ụbọchị amaghi nke ngwaahịa ọhụrụ abụọ a, mana na Actualidad Gadget anyị ga - ama ihe niile na - eme na IFA na Berlin, ebe a ga - ebipụta ozi ndị ọzọ gbasara ndị a na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Hama ga --eweta Scooters ya abụọ na IFA na Berlin